Mowqifka Jubbaland ee ka qeybgalka Shirka Doorashooyinka | KEYDMEDIA ONLINE
Mowqifka Jubbaland ee ka qeybgalka Shirka Doorashooyinka
Maamulka Axmed Madoobe ayaan wali waxba ka bedelin mowqifkiisa ku aadan ka qeybgalka Shirka arrimaha doorashooyinka.
KISMAAYO, Soomaaliya - Wasiirka Warfaafinta Jubbaland Cabdi Xuseen Sheekh ayaa sheegay in Mowqifkooda ku aadan Shirka doorashooyinka uusan waxba iska bedeli, islamarkaana aysan ka tanaasulin doonin shuruudda ah in Gedo lagu soo wareejiyo.
Wuxuu Wasiirka xusay in Jubbaland ay doonayso in loola dhaqmo si lamid ah Maamullada kale, oo loo madaxbaneeyay doorashadda ka dhacaysa labada degaan doorasho ee lagu heshiiyay Sep 17.
Hadalka Wasiirka wuxuu imaanaya xili Baydhabo ay ku shirayaan gudiyo uu Rooble magacaabey, oo u gogol-xaaraya Shirka la filayo inay yeeshaan Madaxweynaha mudo-xileedkiisa dhamaaday Farmaajo iyo Madaxda Maamul Goboleedyada, kaasoo aan rajo badan laga qabin inuu dhaco.
Shirkii ugu dambeeyay ee Dhuusamareeb waxyaabaha la isku mari waayay waa arinta Gedo, oo Axmed Madoobe dalbaday in gacantiisa lagu soo celiyo, islamarkaana loo dhiibo doorashadda Xildhibaanada heer Federaal ee Garbahaarey.
Laakiin Farmaajo ayaa ka diiday in Axmed Madoobe u dhiibo masiirka Beeshiisa Mareexaan, oo waligeed kasoo horjeeday Maamulka fadhiya Kismaayo oo ay ka tabanayaan dhibaatooyin badan oo u geystay.
Axmed Madoobe wuxuu ku yimid Taangiga Kenya, oo Kismaayo ku qabsaday 2012, mana jirto cid u dooratay Madaxweynaha Jubbaland mudo saddex jeer ah ayuu isaga is caleemo-saarey, iyadoo aan taageero ka haysan shacabka Jubbooyinka iyo Gedo.